Ungayifaka njani i-eyelashes yobuxoki ngokufanelekileyo?
Yonke intombazana iphupha lokuba ne-eyelashes emide enokubangela ukubonakala kwakho kungenakunqandwa kunye ne-chic. Kodwa akubona wonke umntu owanakekelayo ngokuchanekileyo. Ewe, kunye nexesha lobuhle boononti alukho intombazana. Kungenxa yeemeko ezinokuthi ungasebenzisa iifowuni zobuxoki. Abafunanga isicelo sesidumbu, okulungileyo. Ngokuqhelekileyo, i-eyelashes yobuxoki ibonakala bhetele kwaye ihlambuluke ngaphezu kwezihlobo zabo. Kodwa indlela yokudibanisa ngokufanelekileyo intambo yeeyelashes? Kwanele ukugcina imithetho emininzi, kwaye ngoko unakho kalula kwaye ungenakonakala kwintsimbi eyelashes.
Namhlanje, ama-eyelashes amanga afanelekileyo. Zininzi iinkwenkwezi, abadumileyo basebenzisa i-eyelashes yobuxoki. Ziza ngeendlela ezahlukeneyo, ukusuka kwi-eyelashes kunye neentsiba, ezintle ngeenkontsho. Eyelashes ezingamanga zingasetyenziswanga kuphela kwiintsuku ezithile, kumacandelo amaqela, amaqela, njl, kodwa nakwiintsuku eziqhelekileyo.
Okokuqala, kuyimfuneko ukuchonga uhlobo lweeyela ezifanelekileyo kakhulu kuwe. Siza kuqwalasela iingcebiso eziliqela malunga nendlela yokwenza i-eyelashes yobuxoki.
Inkqubo yokwenza i-gluing.
Okokuqala, lungiselela zonke izinto zokugcoba esizifunayo. Eyelashes, kwi-hover yokwenza, inxalenye yokugqibela. Ngaphambi kokuqala inkqubo, hlamba ubuso bakho. Emva kokuwomisa nokusebenzisa ukhilimu onondla, siyaqhubeka nokwenza. Faka izicelo zonke izimonyo ezifunekayo kunokuba usebenzise. I-Tonal cream, i-shadow shadow, i-mascara, kunye ne-podvodku. Ukuba uneeyelashes ezichanekileyo, zenzeke nge-forceps ukuze i-eyelashes yakho ingabonakali nakwii-invoyisi. Sebenzisa i-mascara kuphela ngaphambi kokuqala inkqubo ye-gluing. Oku kuya kuvumela iifowuni zobuxoki ukuba zikhangeleke ngokwemvelo.
Inqanaba elilandelayo lilukhombi lweeyile ephosakeleyo. Kuxhomekeke kuye indlela ubeka ngayo i-eyelashes, kunye nendlela abaya kujonga ngayo. Faka isicelo samaconsi amaconsi athile kwi-arc ye-eyelashes uze ubonise ijwabu leso. Emva koko, cindezela ngobumnene nangenene, uze ubambe imizuzwana embalwa. Kodwa ukuba usebenzisa i-eyelashes, uya kuba nexesha elinzima. Thatha inqwaba efanelekileyo, kwaye ngamnye usebenzise i-glue yeglue. Emva kwendlela efanayo kunye ne-arc ye-eyelashes yethu, yenza oku ngentsimbi nganye. Qaphela inqubo yokwenza i-gluing, kuba ukuba i-glue iya kwamehlo, oko kuya kuba kubi kakhulu kwimpilo yamehlo. Ungasebenzisi iglulo elincinci, uthenge ixabiso elininzi, linesiqinisekiso esininzi. Indlela yokunamathela eyelashes ngokufanayo? Zininzi iindlela zokubamba. Kule nto ungasebenzisa i-forceps, i-tweezers. Kodwa abaninzi banokukhetha ukwenza ngeminwe yabo. Iibhola ze-cilia ebusweni bamehlo, isithintelo ngasinye kufuneka sidibene nomnye. Ukuba i-eyelashes yakho ivela kwi-arc, ke qalisa ukunamathela kunye neendawo zeelesi. Faka isicelo kwi-glue, uze uthethe ngobumnene i-eyelashes ukusuka kwikona enye ukuya kwelinye. Ukuba i-cilia yakho yokwenza ingakanani ixesha elide kunabo, unokuyinciphisa ngokukhawuleza ngezikrini eziqhelekileyo.
Khangela ukuba uye wawagcoba kakuhle. Ngamanye amaxesha azinamathele ekupheleni, kwaye aqala ukufumana unganca emehlweni. Musa ukukrazula i-eyelashes yakho ekupheleni kwayo, ngaphandle koko ungaziqhawula ngokupheleleyo. Ukujonga ukuba uzinzile kangakanani, qhafaza ngokukhawuleza, uze uqine ngamandla. Ukuba kulungele wena, ke unamathele i-eyelashes ngokukhuselekileyo. Emva koko siqhubela phambili. Ukwenza oku, thabatha i-mascara ngamehlo, uze wenze i-eyelashes, zombini eyakho kunye nokufakelwa. Gwema ukuba ne-mascara kwi-eyelashes yakho kunye nee-patches zee-shades ezahlukeneyo, oku kusebenza kwi-eyelashes ngokwabo.
Ukusetyenziswa kweefowuni zobuxoki ekhaya.
Ngoku siza kuqwalasela imithetho emininzi yokusebenzisa iifowuni zobuxoki ekhaya.
Ukuze wenze i-eyelashes yokufakelwa i-eyelashes encinci kwaye iguquguquke ngakumbi, gcina i-eyelashes yakho ngomunwe wakho, kwaye ngexesha elifanayo kufuneka ucinezele isandla sesibini.
Ukuba iifowuni ezingamanga zide kakhulu kwamehlo akho, zithatha iisisi, uze uzitshintshe ukusuka kwicala eliphezulu. Emva kwayo yonke, i-eyelashes yakhe iyona yintsholongwane kwaye inkulu. Kule meko, inxalenye enhle kunazo zonke zeeyelashes ziza kuhlala kunye nawe, kwaye kuya kukukholisa amehlo akho.
Ukuba ugqiba ukuhlamba zonke iimpepha, iifowuni zamanga kufuneka zihlambulwe kuqala. Kwaye ke ngoko uqala ukukhenkcela ebusweni bakho. Ukuba ufuna ukusebenzisa ii-eyelashes ezithengiweyo, kufuneka usebenzise i-mascara engenawo amanzi. Iyakusindisa i-eyelashes engamanga, ibenze ixhathise.
Ukuze ube nempembelelo engokwemvelo, ungasebenzisa iifowuni zobuxoki kungekhona nje ngeentloko ezingaphezulu, kodwa nakwii-eyelashes ezingaphantsi.
Kodwa iifowuni zobuxoki zifuna unonophelo olunzulu. Ukuze ube nomboniso ococekileyo, kufuneka ukhumbule ukuba i-eyelashes ifakwe ngaphezu kweentsapho zazo. Ngaloo ndlela, abayikulimaza i-eyelashes yakho, kwaye baya kukhangeleka ngokwemvelo. Kumgca ophakathi kwe-eyelashes kwakungabonakali, ungasebenzisa ipensele emnyama njengelinen.
Izindlela zokuvuselelwa kombuso ngaphandle kokuhlinzwa
Ukunyamekela konyango emva kweminyaka engama-27
Ukunyamekela ngokufanelekileyo i-eyelashes ezilimele
Iingcebiso zomntu: i-eyelashes ende kunye nobude
Izifo ze-parasitic zamathambo esifuba
Isaladi kunye nama-pancake
Imizobo yeebhondi zabaqalayo
Isaladi esilulako ye-berries kunye neeshizi zebhokhwe kwi-actress uAnna Snatkina
Izitya zokutya ezivela kwiibhotsi
Umbala wamehlo kunye nomlingisi
Kulula kangakanani kwaye ngokukhawuleza kunokukwazi ukukhupha ekhaya?
Isaladi "Yonke into ehambayo"
IsiNgesi kubantwana abane-Piggy ne-Stepashka (izifundo ezingu-52) 2003-2007 i-TVRip
IBevershire Yorkshire Terrier
Iipiletayi zifake kwi-oven
Hammam yokubhabha yaseTurkey